🥇 ▷ Waad ku guuleysatay & # 039; t waad ilowday Motorola & # 039; s taxanaha taxanaha ah, ma doonaysaa? Waa kuwan wararkii ugu dambeeyay ee Moto G8 (Plus) ✅
Waad ku guuleysatay & # 039; t waad ilowday Motorola & # 039; s taxanaha taxanaha ah, ma doonaysaa? Waa kuwan wararkii ugu dambeeyay ee Moto G8 (Plus)
Bilihii la soo dhaafay, Motorola waxay ka hadashay lafteeda gaar ahaan taxaneheeda casriga ah ee One, kaas oo dhowaan soo dhoweeyay soo noqoshada 21: 9 soo bandhigida, iyadoo la raacayo tusaalaha aaladaha ugu dambeeyay ee Sony. Si kastaba ha noqotee, guriga baalasha leh ma iloobin jacaylkiisii ​​hore, ama Taxanaha Moto G, taas oo damaanad qaaday sumcaddeeda iyo qadarinteeda taageerayaasha xitaa waqtiyada ugu jilicsan ee taariikhdeeda. Isla markaana waxaan arki karnay furitaankii ugu horreeyay Moto G8.
Sida ay soo wariyeen asxaabta ka socota Soo saareyaasha XDA, kaas oo tilmaamaya il lagu kalsoonaan karo, Moto G8-ka cusub – kaas oo sidoo kale lagu magacaabi karo Moto G8 Plus – lagu qalabeyn lahaa a 6.3 ″ HD buuxa ‘ (1,080 x 2,280 pixels, 19: 9) malaha tikniyoolajiyadda IPS, sidaa darteed adigoon lahayn akhristaha faraha la iskudaray. The qori si loo soo bandhigo waxay ugu fiicnaan laheyd Snapdragon 665, oo ay caawisay 4/6 GB oo RAM ah waa 64/128 GB ee xusuusta gudaha gudaha UFS 2.1, kaas oo aad ugu wanaagsan qaybta suuqa dhexe.
AKHRISO: Motorola One Vision, dib u eegista
Waqtigan xaadirka ah ma jiraan wax faahfaahin ah oo ku saabsan baytariga, halka qaybta sawirku ay hagayaan a 48 megapixel f / 1.79 dareeraha ugu weyn (awood u leh iskudhafka 4 pixels 1, midda dhalaalaysa 12 megapixel shot), mid kamarad balaadhan (kaliya 94 ° in kastoo) laga bilaabo 16 megapixel f / 2.2 iyo dareeme saddexaad oo loogu talagalay xisaabinta qoto-dheerida laga keenay 5 megapixel f / 2.2. Dhanka kale, kaamiro ayaa ka heleysa dhanka hore 20 megapixel f / 2.0.
Moto G8 Plus sidoo kale waa in lagu saleeyaa Android 9 Pie nooca (wax yar) nooca loogu talagalay Motorola, sidaa daraadeed qayb kama ahan barnaamijka Android One iyo jiritaankaNFC, faa iido u leh bixinta mobilada. Faahfaahinno yar oo ku saabsan qiimaha iyo helitaanka, laakiin bilowga ayaa wali la filayaa bilaha soo socda.